Saynisyahankii ‘sirti ugu weyneyd dunida’ suuli tareen ku illaaway | Biyoguurenews.com
Home Wararka Saynisyahankii ‘sirti ugu weyneyd dunida’ suuli tareen ku illaaway
Subaxnimadii Janaayo 7, 1953, Saynisyahanka nukliyeerka John Archibald ayaa soo istaagay albaabka hore ee suuliga tareenka oo uu nin ku gudanayey xaajada sida caadiga ah looga guto goobahaasi oo kale.
Magaca iyo Sumcadda aadka u sarreyso uu ku leeyahay Jaamacadda Priceton iyo Bulshada Cilmiga Sayniska Mareykanka marka la eego haddii lagu arki lahaa isaga oo gudaha u eegaya Suuli uu qof xaajadiisu ku gudanayo waxaa hubaal ah iney fadeexaad sumcaddiisa burburiso halkaasi ka soo gaari lahayd.
Laakiin Wheeler, markan ma ogeen waxa dhici karo haddii la qabto isaga oo muqsusha sii eegaya oo waxa ugu darnaa waxa uu raadinayo muhiimadda ay leeyihiin.
Ujeedkiisuna ma ahayn in qofka suuliga ku jiro uu eego balse suuliga uu ninka kaga dambeeyey ayuu ku tuhmayey inuu bashkhadda sirta aadka u weyn xambaarsan uu uga soo tagay.
Waxayna Saynisyahanadu illaaween xafiiski looga talo galay daqiiqado ka hor iney baqshadda gaarsiiyaan.
Wheeler oo ay saaxibbadi ugu naaneysaan “Johnny” ayaa mas’uul ka ahaa mashruuca Manhattan, oo ah mashruuca hirgeliyey bamki atoomika ee ugu horreeyey xilligi dagaalka ilaa iyo 1938-kina wuxuu agaasime ka ahaa mashruuca Mt.Horn B, isaga oo maaddada Physics ka dhigayey Jaamacadda Princeton.
Waxa uu tareenkii habeennimo u raacay Washington DC si uu ula kulmo wakiillada shaybaadhka cilmi-baadhista badda ee Maraykanka si uu ugala hadlo mashruuca iyo halka uu marayo. Si kastaba ha ahaatee, maadaama uu hadda ku sugan yahay caasimadda, wuxuu go’aansaday inuu shakhsi ahaan la wadaago aragtidiisa ku saabsan bamka hydrogen-ka guddiga wadajirka ah ee tamarta Atomiga (Guddiga tamarta Atomiga).
Dukumanti 6 bog ka kooban oo ay ku dhantahay xogta ku saabsan sida loo diyaariyoo Hydrogen bomb ayaa bashkhadda lagu riday loona dhiibay agaasimaha mashruuca. Xilligaasina bamkan halista badan oo ah kii ugu horreeyey oo la sameeyo waxaa haystay oo keli ah Mareykanka.
Habeenki dokumantigi ayey soo saareen macluumaad ayeyna ka qorteen. Subaxi marka uu waaga u baryay halka uu dkumantiga u xafiiska iuu uga tagi lahaa syu sii qaatay wuxuu la aaday dhanka Suuliga, kaddibna halki bashkhadda saaray ayuu kaga soo tagay.
Waxyar kaddib wuxuu xusuustay inuu bashkhaddi muhiimka ahayd inuu suuliga uga soo tagay iyada oo xilligaa suuliga saynisyahanka uu ka soo baxay uu qof kale kaga dambeeyey oo uu isticmaalayey.
Marki uu arkay inuu ninki suuliga ku jiray uu soo baxay ayuu si degdeg ah suuligi u galay wuxuu gacanta ku soo dhigay bashkhaddi uu meesha kaga tagay. Wuxuuna aad ugu farxay inuu bakhashaddi muhiimka ahay uu jirta sirta muhiimka ah inuu soo helay, wuxuuna ku soo laabtay qolkiisa oo wuxuu galay alaabtiisa inuu xirxirto.
Muddo kaddib marki bashkhaddi la furay waxaa bashkhadda ku jiray dokumantigi ay ku ogaayeen mid aan eheen oo waraaqihi sirta ee ku jrtay lagala baxay.
Kaddibna waxaa billowday baadigoobka waraaqihi muhimka ahaa ee la waayey., waxaana laga baaray goob walba ay islahaayeen waad ka heli kartaan. Xataa Xaruunta tareenka washington ku yaalla ee ay Saynisyahannadu isticmaaleen rakaabki saarnaa oo dhan waa la baaray balse baaritaanka laguma guuleysan.
Wheeler waxaa walaac iyo walbahaar xooggan ku abuuray dokumantiga la waayey inuu gacanta u galo sirdoonka Midowgii Soofiyet.
Markan fursadda keli ee u bannaan waxay ahayd inuu Guddiga Wadajirka ee Atoomikada (JCAE), uu ku wargeliyo dokumantigi muhiimki ahaa inaan fara lagu hayn.
Shan toddobaad kaddib Charles Lyons oo sirdoonka Mareyknaka ka tirsanaa wuxuu baaritaan uu ku billaabay shan qof oo Wheeler tareenka la saarneyd tuhunna uu soo galay.
Waa maxay waxa ku jiray warqad bamka hydrogen-ka?
Waxyaabaha uu warqadda bashkhadda ku jirtay uu habeenkaas uu Wheeler ka akhriyey weli waa qarsoodi. Maadaamaa aan wax xog ah laga helin wareysiga Wheeler ay FBI-da la yeelatay.
Hase yeeshee wuxuu ahaa mid xaqiijinayey Mareykanka inuu diyaar u yahay tijaabo lagu guuleysta oo hubka Niyuukilarka ah.
Waxaa xilligaasi Mareykanka diyaar u ahaa dhowr nooc o ka mid ah hubka Niyuukilarka oo diyaar u ahaa in la isticmaalo.
Wheeler baarayaasha wuxuu u sheegay xogta sirta ee bashkhadda ku jirta iney ka mid ahayd xog farsamo oo faahfaahsan o ku saabsan sida loo sameyn karo bam casri oo ka duwan Bamka Atomika ee la tijaabiyey.
Cabsi iyo Waalli
Dokumantiga Bamka Atomika ku saabsan ma lumin ama lama waayin mid ka mid ah xilliyadi ugu adkaa uu socday dagaalki qaboobaa.
Waxaana xilligaasi laba sano iyo bar socda dagaalki Korea oo ay markaa ka muuqan wax astaan ah oo muuujineyso inuu soo gabgaboobayo.
Baraaha sare ee kiiska Joe McCarthy ayaa si weyn uga walaacay iney xogtaasi gacanta u gasho waddamada shuuciga ee ku yaalla qaaradda Aasiya.
Dhinaca kale waxaa xilligaa xukun dil ah lagu riday sirdoonnada arrimaha Niyukilarka ee kala ah Julies iyo Ethel Rosenberg.
Dukumeentiga sirta ee bamka hydrogen-ka ayaa laga yaabaa inuu Wheeler habeenimadii Talaadada uu si un u ilduufay ayna dhici karto in lagu waayey dhismaha tareenka, shandadaha ama sariirta uu habeenkaa seexday.Laakiin markii madaxweynaha la doortay ee Eisenhower arrinta loo xilsaaray bil ka dib inuu ku dhawaaqo luminta dukumeentiga Golihiisa Amniga Qaranka, badankood waxay rumaysnaayeen inay sirdoonka midowgii Soofiyeed gacanta u galeen.
Madaxweyne ku xigeen oo ahaa Richard Nixon wuxuu FBI-da uu ku amray iney baaritaan qoto dheer ku sameyso xubin kasta oo ka mid ah Guddiga Wadajirka ee Bamka Atoomika (JCAE).Eisenhower wuxuu ka codsaday kaaliyihiisa inuu la xidhiidho Agaasimaha FBI-da ee xilligaa Jay Edgar Hoover wax ku saabsan “ilaalinta badbaadada” ee dhammaan faylasha guddiga, si ay dukumeentiyo kale haddana u lumin.
Saraakiisha FBI-da ee ka soo jeeda bariga Maraykanka ayaa waraystay boqollaal qof waxayna dokumantiga istaanka tareennada iyaga magaalooyinka Washington dhan walba uga baxay.Baadhitaanku wuu dhammaaday, Eisenhower wuxuu billaabay inuu u jeesto arrimo kale oo muhiim ah, oo ay ugu muhiimsanayd isku daygii lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka Kuuriya.Daraasiin dukumeentiyo bamka hydrogen-ka ah ayaa laga yaabaa in maalin laga helo kaydadka Kremlin.Waxaa hubaal ah in toddoba bilood uun ka dib, Ogosto 1953, Midowgii Soofiyeeti waqooyi bari Kazakhstan uu ku tijaabiyey bamkiisa nooca Haydaroojin-ka
Sannado badan ka dib, Wheeler wuxuu yidhi: ‘Weli waa arrin xiiso leh in laga fikiro in dukumeentigeyga uu xaday sirdoon ka socdo Midowga Sofiyetii. Wuxuuna aaminsan yahay Dokumantiga muhiimadda intaa le’eg leh iney sidaa fudu ku lumin karin waa haddii ay cid kale ka xadin.Roger Harmston oo qoraa iyo wariye buuggiisii ​​ugu dambeeyay, uu ugu magacdaray ‘Labo Daqiiqo oo Saqda dhexe: 1953-ki soo baxay iyo buuggiisa kale uu ugu magac daray ‘Sannadka Nolosha Khatarta leh; ee la daabacay 2021-ka wuxuu si faahfaahsan uu ugu soo qaatay baadigoobki sirta muhiimka ee ay Saynisyahnada Mareykanka lumiyeen oo ilaa iyo hadda aan la ogeen cidda ay u gacan gashay.
Previous articleDoorashada Soomaaliya 2022: Guusha Xasan Shekh Maxamuud maxay uga dhigan tahay Colaadda Tigray?
Next articleGudoomiyaha Xisbiga wadani muxuu usheegay reer burco xuskan 18 ee cusub